Shuntuki goat tomato. Famaritana ny karazana goavam-be: ny karazan-tsimparom-bokatra (sary) - Tavoahangy mena - 2019
Ahoana no hambolena sy fihinana voatabia "Shuntuk giant"
Amin'izao fotoana izao dia misy karazana voatabia maromaro izay misy voankazo be dia be. Nefa na dia eo amin'ireo voatabia goavam-be aza dia misy ny olona miavaka.
Raha te hamboly voankazo iray avy amin'ny voankazo 1 ianao dia afaka manamboatra salady ho an'ny fianakaviana lehibe, dia tokony hifidy ny karazana "hanta Shuntuk" ianao.
Ny endriky ny voa sy ny vokatra
Famaranana ny zana-ketsa
Fanomanana voa sy fambolena
Fikarakarana sy fikarakarana
Aretina sy fisorohana aretina
Fanangonana sy fitehirizana
Araka ny hevitr'ilay anarana, ny voankazo dia miavaka amin'ny habeny lehibe. Ilaina ny fitomboan'ny trano fonenana, ary amin'ny toerana malalaka, mila akanjo. Any amin'ny faritra atsimon'i Rosia sy ny faritr'i Okraina manontolo dia mihamitombo hatrany amin'ny toerana malalaka. Saingy any amin'ny faritra hafa ao amin'ny Federasiona Rosiana sy any Belarosia, ity toeram-pambolena ity dia hahatsapa tsara kokoa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, na dia hanome vokatra eny an-kalamanjana aza izany.
Miankina amin'ny karazana indeterminantnyh, ny kirihitra dia afaka mitombo amin'ny 2 metatra mahery. Ny tandroka dia mahery, mahery, mba tsy hitombo, tsara ny mamorona singa iray amin'izy ireo. Ao amin'ny ranom-boankazo iray 4-6 dia misy ovara, fa mba ahafahan'ny tazo maniry betsaka toy ny azo atao, dia tokony havela eo an-tanany ny ovaire roa.
Zava-dehibe izany! "Shuntuk goavambe" dia tsy hybrid, fa isan-karazany voatabia. Midika izany fa ny voan'ny voankazo voaangoninao dia miaro tanteraka ny toetra amam-panahy, izay midika fa mety amin'ny fambolena.
Ny voankazo feno mena dia mena, manana efamira 10 isam-bolana. Ny endriky ny voankazo dia boribory, mihatsara kely ny ambony sy ambany. Ny ambany dia ny felam-boninkazo miaraka amin'ny voankazo, ny latsaky ny voatabia amin'ny voatabiha. Manodidina ny fitoeran-jiro, mandra-pahavitrihana ny voatabiha, misy toerana maitso maitso. Anisan'ireo tombontsoa azo avy amin'ny karazany ireto manaraka ireto:
tena avo lenta;
vokatra tsara sy tsiro mahafinaritra;
tsara ny fitaterana sy ny fitehirizana;
manohitra ny bibikely sy ny aretin-koditra.
Anisan'ireo tsy fahombiazana (ary na ny havany aza), dia afaka manasokajy angamba ny filàn'ny akanjo mandidy, angamba na dia iray monja mandritra ny fizaran-taona aza.
Fantatrao ve? Ny tomatena lehibe indrindra, voatanisa ao amin'ny boky Guinness Records, dia navoakan'ny G. Graham avy ao Oklahoma tamin'ny 1986. Ny voankazo dia mihoatra ny 3,5 kg. Ity mpihaza tompon-tanimboly ity dia nitombo tsimokaretina tomatenina, izay nahatratra 16 metatra mahery. Io kirihitra io tao anatin'ny latsaky ny herintaona dia niteraka voankazo 12 300 mahery.
voankazo - 440-480 g, raha tsy manala ny akanjom-bovoka ianao, raha avela oviana 2 ao anaty felana, ny lanjany dia hahatratra 750-1450 g;
vokatra - 13 kg / sq. M;
matotra - mid-season;
ny fotoana mamy - 110-114 andro manomboka amin'ny fitifirana voalohany;
fotoana - ampiasaina amin'ny endrika mangahazo, fikarakarana;
Io fomba fiasa io dia tokony hiantsoroka andraikitra tena tsara, manana ny voka-pifandraisana ilaina ho an'ny fifantenana tsara amin'ny zana-ketsa. Ny safidy azo ekena indrindra dia ny mividy katsaka avy amin'ny mpamatsy azo itokisana.
Raha tsy misy olona tahaka izany eo amin'ny namanao dia tsy maintsy mitsidika ny tsena ianao. Misy hatrany ny mety hampidi-doza eo amin'ny tsenam-bola hividianana tsaramaso marefo, saingy amin'ny fanarahana torohevitra tsotra, azonao atao ny mampihena izany risika izany:
Voalohany, anontanio ny mpivarotra momba ny zana-ketsa, momba ny karazana voatabia. Ny olona iray tena mafana fo dia hanomboka hilaza aminao momba ny voatabia, hamaly tsara ny fanontanianao rehetra. Ireo mpamboly ireo dia azo atokisana, matetika izy ireo dia mandany fitaovana tena tsara, ho azy ireo ny tena zava-dehibe dia tsy vola (na dia mazava ho azy aza fa tsy ny vola ihany koa ny vola), fa ny fanekena ny "marika manokana". Ireo olona ireo dia tsy hamela ny zana-ketsa (na karazany hafa) ho an'ny kalitao, ho laza tsaratsara kokoa amin'izy ireo.
Ny taonan'ny zana-ketsa dia tsy tokony hihoatra 45-50 andro. Ny kirihitra rehetra dia tokony ho haavony mitovy ihany, amin'ity tranga ity, dia mitranga amin'ny fotoana iray ihany ny voankazo.
Ny fitomboan'ny isam-pamokarana dia 35-40 cm, tokony hisy 9-12 ny ravina voavolavola amin'ny tongotra.
Amin'ny fototarazony sy ny fakany dia tsy tokony ho andian-tsangam-batana, tavy, pigmentation.
Ny felam-boninkazo dia tokony ho ny endriny marina, mijery ny salama, tsy manana tsiranoka ny lethargy.
Raha mihantona ny ravina, ary ny lokon'ny zavamaniry dia samy hafa amin'ny tsiranoka mipetaka amoron-tsiraka, dia azo inoana fa nampiasa dipoavatra be loatra ny tsiranoka.
Ny vozona dia tokony ao anaty tahiry misy ny fonosana, ao amin'ny faritra fotony dia tokony hasiana fanenitra ny fonosana.
Haniry voatabia tsara indrindra amin'ny fasika sandika sy tanimanga. Eo ambanin 'ny fandriana dia misafidy toerana iray izay mikatona amin'ny drafts, miaraka amin'ny fahazavana voajanahary tsara, fa ny tara-masoandro tsy miankina kosa dia tsy mianjera eo amin'ny kirihitra.
Vakio bebe kokoa momba ny fihodinan'ny voankazo.
Ho an'ny voatabia, ny voankazo dia tena zava-dehibe. Ny tazo dia mitombo tsara rehefa:
Azo afafina rehefa:
Ary taorian'ireny voankazo ireny, voatetika ny tsimoka:
jono, afa-tsy ny cucumbers;
Toetry ny mari-pana hampiakatra ny mari-pana:
tany -14 ° C;
Air tamin'ny tolakandro - 23-25 ​​° C;
rivotra amin'ny alina - tsy ambany ambany noho 14 ° С.
Zava-dehibe izany! Ny fikarakarana ireo voatabia dia mitaky be dia be sy mahazatra: raha mitombo ny habetsahan'ny orana, rano ny 4-5 andro. Tsy azo ekena ny fivoahan'ny fakom-bozaka, miaraka amin'ny fihenan'ny mari-pana amin'ny lohataona amin'ny lohataona, ny faritra fotsy dia mulched.
Tokony ho 55-60 andro mialoha ny hambolena katsaka dia tokony hamafy ny voa ho an'ny zana-ketsa. Raha te hahalala ny daty voafaritra tsara amin'ny famafazana, ampiasao ireto kisary manaraka ireto:
Fantaro amin'ny alàlan'ny kalandrie zaridaina, amin'ny fotoana ao amin'ny faritra misy anao, ny rivotra sy ny tany dia mamiratra hatramin'ny farany ny mari-pana (rivotra: andro - 23-25 ​​° C, alina - 14 ° C sy ambony, tany - 14 ° C);
Hatramin'ny fotoana tokony hambolena voatabiha amin'ny tany, tokony manapaka 8 herinandro ianao, ny vokatra dia daty mitovitovy amin'ny famafazana voa ho an'ny zana-ketsa.
Ny voa dia alaina alohan'ny famafazana. Raha izany, raha marika fanta-daza ny fitaovana voa, ary azonao antoka fa tena vokatra azo avy amin'ny mpanamboatra azy io, tsy voatery hodiana ireo voa ireo. Amin'ny tranga hafa, tokony atao ny fitsaboana:
Ho an'ny fahasimbana dia mametraka vovobony amin'ny permanganate potassium (1 g / 100 ml rano) mandritra ny 20 minitra;
Ho an'ny tanjona iray ihany, afaka manangona 1 andro ianao amin'ny vahaolana amin'ny soda fanosehana mitovy amin'izany;
Miaraha amin'ny Phytosporin - fanentanana ny fitomboana, araka izay voalaza ao amin'ny torolalana.
Ankehitriny dia mila manomana ny substrate ianao. Raha manapa-kevitra ny hanao izany ianao (azonao atao ny mividy famolavolana voaomana ho an'ny zana-ketsa any amin'ny fivarotana manokana), ampiasao ireto fitaovana manaraka ireto:
tavoahangy - 1/3;
tora-bato - 1/3;
fasika - 1/3.
Tsara vinaingitra, mametraha ao anaty vata fampangatsiahana misy lavaka ary manaova vahaolana:
superfosfate - 1 tbsp. sotro;
sulfat potassium - 2 tsp;
urea - 1 tbsp. a spoon.
Ny habetsan'ny diloilo voatokana dia levona ao anaty siny rano, alatsaho ny fonosana amin'ny fomba toy izany amin'ny fanesorana ny hafanana tafahoatra amin'ny lavaka.
Fantatrao ve? Nandritra ny 800 taona talohan'i JK, ireo mponin'i Amerika Afovoany sy Atsimo dia efa mihinana voatabia. Ireo azteky nanome ny kolontsaina ny anarana hoe "voatabia", na "berry lehibe". Ny Eoropeana dia nahafantatra tsimparifatra tamin'ny taonjato faha-16, noho ny conquistadors.
Azonao atao ny mampifandray amin'ny ampahany mitovy ho an'ny horohorontany, tavy sy sodina, mifangaro tsara. Ao anaty tavoahangin'ilay menaka mba hanaovana latabatra ambony superphosphate sy 1 kaopy voapetaka vita amin'ny hazo.
Ny tany ho an'ny zana-ketsa dia tokony hototoina. Tsy maintsy atao izany, na aiza na aiza nalehan'ny tany - nividy tao amin'ny fivarotana iray na nifangaro tsy miankina. Ireto ambany ireto dia 3 amin'ireo fomba tsotra indrindra sy mahomby indrindra amin'ny fahasimban'ny zaza ao an-trano:
Apetaho 3-5 cm eo amin'ny sehatra iray eny amin'ny tsofa makarakara, hametrahana ao anaty oven mandritra ny 20 minitra amin'ny 200 ° C.
Manaova vahaolana amin'ny alika Mangatsiaka ao anaty rano.
Vitan'ny roa minitra ao amin'ny mikrô, amin'ny hery fara-tampony.
Rehefa vonona ny voa sy ny tany, fotoana izao hamafy. Ho an'ny zana-ketsa mitombo dia tsara ny mampiasa kaopy tavy, fa afaka manao amin'ny plastika (500 ml), miaraka amin'ny lavaka any ambany mba hanaovana drainage. 2 andro mialoha ny famafazana amin'ny solomaso mandatsaka ny tany dia tokony "manasitrana" kely izany. Ny ampitson'io, raha ilaina izany, tokony handrotsa ny tany (alohan'ny hanamboarana ny voa, dia tokony hosotroina kely) miaraka amin'ny rano mafana.
Ao amin'ny tany misy rantsan-tànana dia mampihena ny fahaketrahana (1-1.5 santimetatra), izay mametraka ny voa. Mipetraha amin'ny tany, atsofoka amin'ny tavoahangy fanatobiana, afangaro amin'ny sarimihetsika.
Manoro hevitra ny mahafantatra tsara kokoa ny mamelona ny zana-ketsa voatabiha.
Mandritra ny fisehoan'ny tifitra, ireo singa fototra tokony hifehezana dia ny hafanana, tokony eo anelanelan'ny 23-25 ​​° C, ary ny haavony (ny tany tokony ho maivana kely).
Taorian'ny fisehoan-javatra ny zana-ketsa, ankoatra ny hafanana sy ny haavon-danitra, dia ny lelafo tsara dia lasa manan-danja lehibe. Misafidiana toerana ho an'ny zana-ketsa eo amin'ny varavarankelin'ny lava-bary, fa tsy misy drafitra. Rehefa afaka 2 andro aorian'ny famafazana, dia tsy maintsy ilaina ny manala ny sarimihetsika mandritra ny fotoana fohy (6-8 minitra) isan'andro mba tsy hahatonga ny voa tsy ho simba. Ny hamandoana ny rivotra ao anatin'ireo solomaso dia voafaritra amin'ny fisian'ny fahatsapana ao anaty horonantsary. Raha izany no izy, dia mety tsara ny tany. Na izany aza, ilaina ny fametavetana amin'ny fifehezana mba tsy hahatonga ny tany ho lasa vovoka. Rehefa miseho (5-7 andro) ny tifitra dia esorina ilay sarimihetsika.
Rehefa mamorona toe-javatra tsara (ny mari-pana, ny tany sy ny haavon'ny afo, ny jiro) dia hiseho haingana ireo zana-ketsa ary azo antoka fa hitombo ny fitomboana.
Raha vao malazo ny toetr'andro dia afaka manomboka manamboatra ny zana-ketsa ianao. Ny dingana tokony hatao amin'ny andro tsy misy rivotra. Sokafy ny varavarankely mandritra ny minitra vitsivitsy, afaka manomboka amin'ny fivoriana dimy minitra ianao. Miandrasa ny andro tsara amin'ny manaraka, avereno indray ny fanodikodinana, ampio minitra vitsy, mitohy amin'ny fomba mitovy.
Fantaro raha tsara ny mamboly voatabiha amin'ny tany malalaka.
Amin'ny fotoana hahatongavan'ny zana-ketsa ny habetsaka ilaina mba hambolena amin'ny tany, ary ny tany sy ny rivotra no hafana amin'ny hafanana mety, tokony efa efa vonona ny fandriana. Ny tany ho an'ny voatabiha dia tokony efa nomanina hatramin'ny fararano. Mba hanaovana izany dia mandavaka ny toerana ho an'ny fandriana izy ireo, hanesorana ny ahi-dratsy ary hanafana azy ireo:
Humus - 4l / 1 kilaometatra. M;
superphosphate - tavy 2 tbsp. katsaka. M;
potassium sira - 1 tbsp. katsaka. M.
Amin'ny toe-javatra misy ny tany dia asidra, tokony ampiasaina ny lainy - 0.5 kg / 1 metatra. M. Amin'ny lohataona, 2 herinandro alohan'ny hambolena ny zana-ketsa, dia mameno ny tany toy izao manaraka izao:
Manondraka ny farafara miaraka amin'ny vovo-drongony (lavadrano) - 0.5 kg / 1 kilaometatra. M;
nirotsaka tamin'ny vahaolana lasopy fanosotra hazo - 0.5 kg / 1 kilaometatra. M;
Manolotena siramamy ammonium - 1 tbsp. kitrokely. M.
Ny habetsaky ny entona ihany no notakiana hanitsiana ny kianja 1. metatra, afaka miovaova ny habetsahan'ny rano. Raha ampy maina ny tany, dia sotro 1 isaky ny 1 kilaometatra. m (ho an'ny karazan-diloilo tsirairay), raha maina, ny habetsaky ny fitsaboana dia ravina ao anaty volavolan-drano lehibe kokoa (1.5-2 sotro).
Ny fandriana dia araraotina araka izao manaraka izao:
inter-row spacing - 0.5 m;
ny halavirana eo amin'ny kirihitra - 0.4 m;
Toerana - 3-4 katsaka / 1 kilaometatra. M;
Ao amin'ny tany voaangona voaomana, 3 andro mialoha ny mamboly, ny lavadrano dia vita araka ny drafitra etsy ambony. Ny lavaka dia tokony ho lehibe toy ny kaopy na tsimokazo misy karipetra misy tsiranoka afaka miditra ao anatiny, raha mitombo ny ketsa ao anaty kaopy iray.
Fantatrao ve? Nandritra ny fotoana lava, voatendry ho zavamaniry misy poizina ireo voatabiha, toy ny ovy, izay i Amerika Atsimo ihany koa no toerana nahaterahana. Ny Colonel R.G. Johnson, izay nisakafo tavoahangy voatabia tamin'ny taona 1820 teo anoloan'ny tranon'ny fitsarana tao New Jersey, dia nahavita nanova ny toe-tsain'ny olona manoloana io kolontsaina io.
Ny lavadrano vita dia lavaka amin'ny rano mangatsiaka miaraka amin'ny permanganate potassium (10 g / 1 sotro rano), avy eo lany rano madio ary rakotra sarimihetsika. Ny sarimihetsika dia nesorina ny andro alohan'ny handehanana.
Ny fomba fitsaboana ny zana-ketsa eny an-tany dia mora tsotra, tokony esorinao tsara fotsiny ny zavamaniry avy ao anaty fitaratra (raha toa ianao ka mampiasa azy). Tokony hatao amin'ny fomba toy izany fa ny sisan-tany dia tsy mihetsika. Raha mampiasa kaopy tavoahangy ianao dia tsy mila mamoaka zavatra hafa, mametraka ny zavamaniry ao amin'ny lavaka miaraka amin'ny fahaiza-manao. Mba hanamorana io fandidiana io, ny andro mialoha ny mamboly ny zana-ketsa eny amin'ny zaridaina. Ho an'ny fandefasana dia tsara kokoa ny mifidy ny rahona, fa ny andro tsy misy rivotra.
Ny zavamaniry dia napetraka ao amin'ny lavaka ka ny tendan'ilay fakan-tsarim-pamokarana dia miorina 2-3 cm eo ambonin'ny haavon'ny lavaka.
Andramo ny hametrahana ny kirihitra ao amin'ny lavaka mba tsy hiditra lalina ny fakany (mety mbola mangatsiaka loatra ny tany), fa mitsindrona ao anaty planeta horita;
Manohana ny kirihitra any amin'ny toerana iray mahitsy amin'ny tanana iray, miaraka amin'ny iray hafa, mameno ny lavaka amin'ny tany, mitombo tsikelikely ny faritra fotony.
Rano ny kirihitra amin'ny rano mafana. Raha nanao ny zava-drehetra marina ianao, aorian'ny 4-5 andro dia ho mafy orina ny fakany mba hitazonana sy hanomezana sakafo ny kirihitra.
Lahatsary: ​​Fambolena zana-ketsa eny an-kalamanjana Tomaty tsara tarehy ny tomato. Noho izany antony izany, ny mpikaroka vaovao dia mieritreritra fa tokony hisotro matetika araka izay tratra izy ireo. Tsy tena marina izany, tokony ho rano ny vary, raha ilaina, fa be dia be.
Mila mifantoka amin'ny toetry ny tany sy ny rotsakorana. Raha maina ny tany (tsara kokoa ny tsy mitondra azy), ilaina ny fandroana. Raha ampy ny hafanana, dia tsara kokoa ny miandry amin'ny fitsaboana rano.
Zava-dehibe izany! Raha toa ka efa nahatratra ny fepetra ilaina hambolena eny an-kalamanjana ny taranatsika, ary ny tany sy ny rivotra dia tsy mahafa-po loatra, mametraka ny zana-ketsa ho toerana mahafinaritra ary mampihena ny rano. Noho io fepetra io, mitombo ny fitomboana, ary rehefa misy ny fepetra tsara, dia manangona ny zavamaniry amin'ny tany. Tsy ilaina ny matahotra, tsy mampidi-doza ny fomba, amin'ny toe-javatra mahazatra dia manomboka haingana ny voatabia.
Amin'ny ankapobeny dia mila rano isan-kerinandro ny orana. Raha misy orana kely, dia atao isaky ny 4 andro ny dingana. Raha toa ka ny orana dia ny orana, efa ela no azonao atao raha tsy misy rano. Ny fepetra momba ny rano ho an'ny voatabia dia mila mandamina na amin'ny maraina, na amin'ny ora alohan'ny filentehan'ny masoandro (safidy tsara indrindra). Ho an'ny fandroana, mila mampiasa rano ahitra ianao ary azo antoka fa manana rano voajanahary na ranonorana. Ny vahaolana hafa tsara indrindra dia ny fanodinana fitaovana fanondrahana. Miezaha manondraka ireo zavamaniry amin'ny fomba izay hahatonga ny rano ho any amin'ny faritra fotsy fotsiny, fa tsy mamela fanasana amin'ny tany.
Tsy ratsy amin'ny fandroana voatabiha mameno ny fomba. Ao anatin'ireto manaraka ireto: eo amin'ny andaniny roa amin'ny fandriana, amin'ny lavaka 35-40 cm miala ny kirihitra, misy lavaka lavalava vita, 30-35 cm ny sakany, ary amin'ny halalin'ny halavany. Ny lavadrano dia feno rano mankany ambony, ny rano, tafiditra ao anaty tany, miditra ao amin'ny rafitra fototra.
Mety ho tianao ny hahalala raha azo atao ny maniry voatabia tsy misy rano.
Tena tsara io fomba io satria tena lalina be ny tany ary maivana tanteraka amin'ny fahamendrehana. Tsara ny mampihatra mialoha ireo zavamaniry manomboka mamoa. Fitomboana eo ho eo - 1 bucket / 1 bush. Fenoy ny tranokely isaky ny 4-7 andro, arakaraka ny habetsahan'ny orana.
Aorian'izay ny rano tsirairay dia tokony hamaha ny tany eo anelanelan'ny kirihitr'ala, araka ny fahitana azy. Mandritra ny famafàna, ilaina ihany koa ny fandriana. Ny 3 herinandro voalohany dia tokony halefa tsy misy lalina mihoatra ny 8-10 santimetatra. Aorian'izany, ny halalin'ny famafana dia tokony hovaina ho 6-8 santimetatra, satria mandritra ny dingana, ny rafitra fototra izay efa nitombo tamin'izany fotoana izany dia azo henoina. Ny tany lonaka eo anelanelan'ireo tsipika dia mety ho loaka kokoa.
Fantatrao ve? Hatramin'izao, maherin'ny 10.000 ny isam-bolana, ny karazana ary ny hybrides voatabiha. Ny tanjany kely indrindra amin'ny tomato lehibe dia tsy mihoatra ny 1,5 santimetatra, ny solontenan'ny karazany lehibe indrindra (izay misy "Shuntuk goavana") dia mahatratra 1,5 kg lanjany. Ny palette ny loko, ankoatra ny mena sy mavokely mahazatra, dia ahitana karazana loko mainty sy mavo.
Aza adino ny mikarakara voatabia. Ity teknikam-pambolena sy fiompiana ity dia tena manan-danja tokoa noho izany antony izany:
manampy amin'ny fikorianan'ny tany;
fanamafisana fanamafisana ny tany ao amin'ny faritra fotsy;
manakana ny fototry ny fototarazo tsy ho tonga amin'ny tany;
Tsara ho an'ny fitomboan'ny fakany ao amin'ny planeta horita.
Ny voalohany dia voatabia voatabia aorian'ny fambolena 3 herinandro eo amin'ny zaridaina, dingana faharoa - aorian'ny fotoana. Masking dia fitaovana maoderina mpamboly, izay tanjona lehibe indrindra dia ny hampitombo ny fambolena. Ny fototry ny fomba fitsaboana dia ny mamorona kiraro amin'ny fanesorana ny tifitra. Ireo tsiro ireo dia tsy mamoa, fa ny zavamaniry dia mandany azy ireo ho solony, fa tsy mamoaka ireny loharano ireny amin'ny fananganana oviana vaovao, ary, araka izany, ny voankazo.
Raha tsy tomombana ny pasynkovat, dia hitatra be ny sampana. Ao amin'ny sinisus dia misy dingana vita amin'ny ety ambany, izay antsoina hoe tovovavy. Ny fanesorana ireo tifitra ireo dia mamela ny sampana mitondra voankazo fotsiny. Ny fitsipika fototra momba ny fanongotra:
Raha vantany vao mamony ny borosy voalohany, dia esory ny tongony.
Mitifitra ny fery, miala, na mandroaka, tsy tokony hotapahana.
Esory tsy ho ela ny zana-borona, mandra-pahatongany 4 cm.
Asio ireo zana-borona rehetra eo ambanin'ny sampana ambany indrindra amin'ny oviana. Ao anatin'ireo drafitra izay eo ambonin'io sampana io, dia azo atao ny fisehoan'ny overs. Azon'izy ireo atao, araka ny fahamendrehanao.
Tsara kokoa ny manatanteraka ny dingana amin'ny maraina.
Andramo ny tsy hifaneraserany amin'ny tanan'ilay ranon-tsavily nesorin'ny zavamaniry rehefa esorina ireo amboara. Raha voan'ny aretina ilay zavamaniry, dia azo atao ny mitondra ny aretina ho an'ny kirany ara-pahasalamana. Miaraka amin'ny fingotra, esory ny ravina ambany rehetra mifandray amin'ny tany. Ny tselatra, mankany amin'ireo rantsana ambany miaraka amin'ny ovy, dia tokony ho marefo, manazava araka ny tokony ho izy, miaraka amin'ny fidirana amin'ny seranana.
Zava-dehibe izany! Ny felamamy maitso maizim-pito miaraka amin'ny mari-pandrosoana dia manondro fa tsy ampy ny rano.
Ny fametahana farany sy ny fifehezana ny satroboninahitra dia vita 1-2 herinandro alohan'ny faran'ny fahavaratra. Top-pintana mba tsy hitombo ny kirihitra.
Ireo karazan-tsaretana tsy misy dikany izay misy ny "Shuntuk goavambe" dia tokony hajanona. Raha tsy voakasika ny tifitra, dia mihamitombo ny kirihitra ary mihamitombo hatrany. Izany toe-javatra izany dia fihenan'ny famokarana voankazo goavana.
Misy tetika maromaro (amin'ny 1, 2 na 3). Ho an'ny "giant Shuntuk" dia tsy mety ny tongotra iray, toy ny amin'ny rafitra toy izany dia mihamitombo ny kirihitra, na dia betsaka aza ny voankazo.
Tahaka ny ankamaroan'ny voankazo, ny voatabia, na dia ny aretina mafy indrindra aza, dia mbola mampiahiahy amin'ny aretina sasany sy ny fanafihan'ny bibikely. Teny vitsivitsy momba ny tena mahazatra.
Colorado beetle. Angamba ny fahavalo mampidi-doza indrindra amin'ny voatabia, mamelona ny ravina ary ny overs. Amin'ireo herbicides ampiasaina handravana ity parasita ity, dia afaka manavaka ireto manaraka ireto isika: Bombardier, typhoon, ary ireo solontena hafa izay ny varo-dratsiny dia imidacloprid sy glyphosate. Mampiasa zava-mahadomelina, manaraka ny torolàlana. Tokony hotononina momba ny fomba tsy ampiasana fanafody simika izany: ny kirihitr'ala dia voapoizina amin'ny felam-borona, hazo lavenona. Mandritra ny voninkazo dia miparitaka amin'ny lavenona boribory natao sira.
Zava-dehibe izany! "Shuntuk goavana" Efa ho 100% ny tla sy tavy, dia manohitra ny aretina azo avy amin'ny pilina.
Cricket. Amin'ny ankapobeny io parasita io dia hita any anaty ala misy haavo maimaim-poana sy manana dite avo lenta. Amin'ny endriny, dia mety hampidi-doza ny bibikely sy ny lavany. Amin'ny famakiana ireo andalana ao amin'ny tany amin'ny sombin-tsigara, dia manimba ny fototarazo ny parasitika, ka manakana ny zavamaniry tsy hitombo ara-dalàna. Afaho ny insecticide misy ny imidacloprid (Confidor) ary diazinon (Medvetoks). Ny hetsiky ny Medvetokas, ankoatra ny toaka misy azy, dia mifototra amin'ny toetran'ny bibikely amin'ny fofona. Vakio amim-pitandremana ireo torolalana ary ampiharo izany.
Aza adino koa ny fomba amam-panao:
mampihena ny fampiasana fery;
Ny fakantsariny sy ny toerana eo anelanelan'ny kirihitra dia mamaha ny vanim-potoana.
Avy amin'ny fitsaboana amin'ny ankamaroan'ny olona dia ilaina ny manonona ny fambolena voninkazo-ireo maridalaka manodidina ny farafara, ny fofon'ny voajanahary voajanahary ananan'izy ireo dia tsy hoe ny bera irery ihany, fa ny parasy hafa koa.
Scoop on tomatoes. Ny ravina, ary avy eo ny lolo, dia manimba ny oviana amin'ny zavamaniry. Torohevitra sasany momba ny fomba hamotehana ny parasy:
famoahana zava-mahadomelina Lepidocide isaky ny 7 andro;
Detsis dia tena mahomby amin'ny ady amin'ny valopy.
fanangonana tsy ara-dalàna amin'ny kirihitra;
Isaky ny 10 andro dia asaina manipy voatabia amin'ny fanoratana zana-tsipìka amin'ny tongolo lay;
mipoitra ny sigara sy paraky.
Avy amin'ny aretin'ny voatabia dia tokony hilaza teny vitsivitsy momba izany:
White spotting. Ity aretina ity dia azo tsapain-tànana amin'ny habaka mena eny amin'ny ravina, izay avy eo maina ary mihintsana. Amin'ny marika voalohany, tokony hipoitra amin'ny 0,1% ny vovo-tsolika Bordeaux ny kirihitra.
Zava-dehibe izany! Ny valan-drongony dia manonofy, ratra amin'ny Ramulariasis (fotsy fotsy), ririnina amin'ny ravina nianjera. Noho izany, mba tsy hisorohana ny fiverenan'ny aretina amin'ny vanim-potoana manaraka, ny ravin-kazo rehetra dia tsy maintsy entina am-pangidiana ary hodorana.
Toetran-tsakafo (phyllosticose). Ao amin'ny ravina ambany avy any ambony dia mipoitra ny mena, eo amin'ny ilany havia - maitso ny loko. Raha tsy voatsabo ilay aretina, dia levona ny ravina. Ny famafazana sira amin'ny varahina (1% vahaolana) dia ampiasaina amin'ny fitsaboana.
Rehefa manomboka mijinja dia miankina amin'ny faritra voajanahary. Any Moldavia, Okraina, any amin'ny faritra atsimon'i Rosia amin'ny voatabia voatokana dia marefo amin'ny faran'ny volana Jolay-voalohan'ny volana aogositra. Any Rosia afovoany, any Belzika - 2-3 herinandro taty aoriana.
Angony ny voankazo rehefa tsy mbola nahatratra ny fahamatorana feno izy ireo. Izany fepetra izany dia mikendry ny hamotsorana ireo loharanon-java-maniry: tsy hanome hery ny fivalozana feno ny foetus (izay tsy maintsy mitombo tsy miankina), fa hamorona oviana vaovao. Raha vantany vao tsikaritrareo fa manomboka "resin-tory" ilay zavamaniry (mifanohitra amin'ny fihenan'ny hafanana) io dia tokony hamboarina ny vokatra sisa rehetra. Rehefa mijanona maharitra ao anatin'ny 6-8 ° º ny hafanan'ny alina, dia tsy misy dikany ny mitazona ny voankazo ao anaty kirihitra, tsy ho tonga ".
Fantaro ny antony tsy ahafahanao manangona voatabia ao amin'ny vata fampangatsiahana.
Raha toa ka mahatsapa ny fisian'ny hafanana, ary mbola mipoitra amin'ny voatabia maitso ireo kirihitra dia tokony atao ireto fepetra manaraka ireto:
Ny kirihitra dia miara-miasa miaraka amina fotony ary mandry amin'ny tafio-drivotra miakatra hatramin'ny 1 metatra ary tops amin'ny lalana iray.
Ny landihazo dia voarakotry ny mololo ary havaozina mandritra ny 1.5-2 herinandro. Aorian'io fotoana voatondro io, voaangon-tsakafo no voangona, nesorina ny voamaina sy ny voankazo voarara.
Matetika, isaky ny 2-3 andro, ny fijinjana, mandra-pahatongan'ny tomato rehetra.
Tsy ratsy ity fomba fametahana ity:
Angony ny voankazo mainty sisa.
Manaova sarimihetsika fakana an-jaridaina eo amin'ny gorodon'ny trano fivoahana, ary apetraho amin'ny loto ny lamba bitika.
Apetraho ny mari-pahaizana amin'ny rivotra ao amin'ny trano fandraisam-bahiny 17-22 ° C, ary ny salan'isa 75-80% eo ho eo.
Tahaka ny fanangonam-bokatra, esory ny fahavoazana sy ny rotaka.
Fantatrao ve? Mihoatra ny 94% ny voatabia dia rano, voatabia 100 g fotsiny ny calorie 22, noho izany dia saika ny vokatra tsara indrindra ho an'ny fahavoan'ny fahavoazana.
"Shuntuk giant" no manamarina ny anarany, mahafinaritra ny mpamboly amin'ny voankazo goavana sy ny fikarakarana tsy mendrika. Ny ankamaroan'ireo mpamboly amperora izay niezaka nitombo ireo goavam-be ireo dia lasa mpankafy mahatoky. Miezaha hamboly an'io karazana io ao amin'ny saha misy anao, dia mety ho lasa mpankafy tomateno "Shuntuk" ianao.
Lisitry ny karazany tsara indrindra amin'ny dill miaraka amin'ny famaritana sy ny sary
Ny fampiasana maple amin'ny fitsaboana nentim-paharazana: ny endriky ny medikaly sy ny fanoherana
Famokarana mahomby: hatraiza hatraiza raha mahandro katsaka?
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ahoana no hambolena sy fihinana voatabia "Shuntuk giant"